Khuphela i-WhatsApp simahla kuzo zonke izixhobo | I-Androidsis
I-WhatsApp sesona sicelo sithandwayo sithumela imiyalezo kwimarike, kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, itshintshe indlela esinxibelelana ngayo nabantu esibathandayo, nabahlobo bethu kunye nabo basingqongileyo. Enkosi ngenkqubo yokuhlanganisa kunye nencwadi yemfonomfono, yathandwa njengomlilo wasendle, yiyo loo nto uninzi lwabasebenzisi, xa befumana i-Smartphone entsha, into yokuqala abayifunayo kukukhuphela i-WhatsApp mahala, ukuze ukwazi ukunxibelelana nabahlobo bakho ngokukhawuleza.
I-WhatsApp iyahambelana phantse nazo zonke iinkqubo zokusebenza kweselfowuni, ngaphandle kokuba kukho ingxelo yedesktop enokuthi ikwazi ukuyisebenzisa ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Abasebenzisi bangathumela imiyalezo, imiyalezo yelizwi, imifanekiso, amakhonkco ephepha lewebhu, okanye iifayile kwiifom ezahlukeneyo.
Enye yeendlela ezininzi ze-WhatsApp kukudala amaqela angama-256 abantu, inani elikhulu kakhulu. Ithuba lokuyila nokulawula lilula. Nawuphi na umsebenzisi angafikelela kubo ngesimemo okanye ngokongezwa ngabalawuli.
1 Uyikhuphela njani i-WhatsApp mahala
2 Khuphela i-WhatsApp APK
2.1 Amanyathelo okuqala ofakelo
3 Khuphela i-GBWhatsapp
4 Khuphela i-WhatsApp Aero
5 Khuphela i-WhatsApp engabonakaliyo
6 Hlaziya i-WhatsApp yasimahla
Uyikhuphela njani i-WhatsApp mahala
Ngezifundo zethu ezilula Siza kukufundisa indlela yokufaka i-WhatsApp Kuzo zonke izixhobo zakho, ukuze ungaphoswa nangomzuzu omnye wokunxibelelana nowakho:
Khuphela i-WhatsApp kwiselfowuni ye-Android
Khuphela i-WhatsApp kwithebhulethi
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa siyanceda ukuyifaka simahla. Siyakhumbula ukuba emva kokufunyanwa kwayo nguFacebook, inkampani kaWhatsApp Inc ilususile naluphi na uhlobo lwentlawulo ekusebenziseni iinkonzo zayo, ke, I-WhatsApp isimahla.
Iphepha elisemthethweni leWhatsApp livumela ukhuphelo lwenguqulelo yamva yesicelo esidumileyo esele sinabasebenzisi abangaphezulu kwezigidi ezingama-2.000 XNUMX kwihlabathi liphela ukusukela oko yasekwayo. Namhlanje siza kukubonisa indlela yokukhuphela kunye nokuyifaka kwifowuni yakho ye-Android ngamanyathelo ambalwa alula.
Ukukhuphela Siza kufikelela kwiphepha le-WhatsApp kwaye siya kufikelela kuhlobo lweqonga le-Android, cofa kuKhuphela ngoku kwaye kwimizuzwana embalwa siya kuba nayo kwifolda yokukhuphela yefowuni yethu ukuze siyifakele kamva.
Ukuze sikwazi ukufaka kufuneka sivumele ii-APK ukuba zibekeke ngenxa yokhuseleko lwenkqubo yokusebenza. Ukwenza oku siza kungena «Ukhuseleko» kwaye kwimithombo engaziwayo siyenze isebenze, uGoogle uya kukwazisa ukuba uchanekile kwinto yokuba ukusebenza kwayo bekungenakuba kuchanekile, kodwa khumbula ukuba isicelo se-APK sikwasinye esibonelelwa nguGoogle Ivenkile yokudlala.
Nje ukuba wenze eli nyathelo, zama ukuyikhuphela kwakhona kwaye iya kuyivumela ukuba isebenze ngaphandle kweengxaki.
Amanyathelo okuqala ofakelo
Nje ukuba ukhutshelwe, siqhubeka nokufaka i-APK kwifowuni yethu. I-icon yeapp iyavela kwidesktop yesixhobo, cofa kuyo ukuze uyiqwalasele kwaye uthumele imiyalezo kuludwe lwakho lwabafowunelwa.
Nje ukuba ivulwe, kufuneka samkele iimeko zenkonzo, cofa ukwamkela inyathelo elilandelayo.
Qinisekisa inombolo yakho yefowuni. Baza kukuthumelela i-PIN eya kuthi ifakwe ngokuzenzekelayo. Cofa ku-Kulungile okanye ngokulandelayo.
Ukuba unesipele esidlulileyo kwaye ufuna ukusibuyisela, khetha Buyisela, kungenjalo tsiba eli nyathelo.
Okokugqibela, faka igama lakho okanye isiteketiso ukuze abantu bakuqonde. Ungalitshintsha igama amatyeli amaninzi njengoko ufuna kuseto lwesicelo kamva, ke ungothuki ukuba ulifakile gwenxa.
Nje ukuba ufake igama okanye i-alias, ungatshintshana ngemiyalezo nabahlobo okanye abantu obaziyo.
I-GBWhatsApp yenye yezona mods zaziwayo zeWhatsApp ze-Android. Phakathi kokuphuculwa kwayo ziimpawu ezintsha kunye nemisebenzi eyongezelelweyo ngokukodwa kufakelo lwayo. Ufakelo lulula kwaye kuyakusithatha nje imizuzu embalwa ukuyisebenzisa.
Phakathi kwemisebenzi yayo ekhoyo kukuba nakho ukufihla iincoko ngonqakrazo olulula. Olunye ukhetho kukukwazi ukusasaza imiyalezo ukuya kuthi ga kubantu abangama-600 abakuluhlu lwabafowunelwa ngaxeshanye. Imodyuli ikwasivumela ukuba sijonge imifanekiso kunye nevidiyo ngaphandle kokuzikhuphelela kwisixhobo sethu.
Inezinto ezingenasiphelo, yenye yeemodyuli ezilungileyo onokuzama ukuzisebenzisa kuyo yonke imisebenzi eyongezelelweyo ebandakanyiweyo ngumqambi.
I-GBWassApp Pro inguqulelo yamva nje ye-2020
Umthuthukisi: bonisa i tv
I-WhatsApp Aero yenye yeemods ekuhambeni kwexesha ziye zahlala. Ukufakelwa kubonisa utshintsho olubalulekileyo, ngaphezu kwayo yonke into kugxininisa i-aesthetics kwaye inikezela ngeziphumo ezisemgangathweni. Inemisebenzi efanayo nakwabanye, kodwa yahlulahlulwe ngokwezifiso ezipheleleyo zesicelo sakho seWhatsApp wakube uyifakile.
Phakathi kweminye imisebenzi unokwazi ukuba ngabaphi abantu abatyelele iprofayile yakho, fihla isilumkiso ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngomyalezo ofundwe kwincoko, lungisa ifonti yeleta yeencoko zakho ngokwahlukeneyo, fihla imeko ye-Intanethi, phakathi kwezinye iindlela
Phakathi kwemisebenzi ephambili kunye neempawu ezikhoyo zezi:
Ulawulo olukhulu lokhetho lwabucala
Ithuba lokukhuphela imixholo emitsha
Olunye ukhetho kukhuphelo lwefayile
Khuphela ikhonkco: Khuphela i-WhatsApp Aero
Khuphela i-WhatsApp engabonakaliyo
I-WhatsApp engabonakaliyo yimodyuli esekwe kwisicelo esisemthethweni seWhatsApp. Ikuvumela ukuba wenze ngokusesikweni i-interface yonke ngokulula kwaye unokhetho oluninzi olongezelelekileyo olufumanekayo wakube ufake uhlobo lwamva nje. Unokujonga iphepha lodonga lefowuni njenge-interface okanye uyiqwalasele ukubonisa omnye umfanekiso.
Njengoko igama layo libonisa, i-WhatsApp engabonakaliyo isebenza ekusebenziseni i-app ukukhanya kakhulu kwaye ungacothisi isixhobo. Yongeza uninzi lweempawu zakho ezintsha kunye nee-emojis ukuze incoko yakho ibe mnandi ngakumbi. Phakathi kweminye imisebenzi ebalulekileyo yokuqaqambisa kukwazi ukuthumela iifayile ukuya kuthi ga kwi-1 GB okanye ngaphezulu kweefoto ezili-100 okanye imifanekiso ngaxeshanye.
Hlaziya i-WhatsApp yasimahla
Ityala elifanayo lenzeka ngokuhlaziywa kweWhatsApp, mhlawumbi, kuba ungakhange uhlaziye ingxelo yakho yeWhatsApp ixesha elide, isicelo sikucela ukuba uyihlaziye inkonzo, nangona kunjalo, ahora Hlaziya i-WhatsApp isimahla ngonaphakadeKe ngoko, awuzukufuna ukwenza iakhawunti yakho ye-WhatsApp ngokuhlawula ukuze ukwazi ukuyisebenzisa rhoqo. Kwimeko apho isicelo sicela ukuvuselelwa, kufuneka unxibelelane nomboneleli wakho wesicelo ukuze hlaziya i-whatsapp, nokuba kungokuGcina kuGoogle kuDlala okanye kwiVenkile yeApple yeApple. Akuzange kube lula kwaye kutshiphu ukusebenzisa i-WhatsApp njengoko injalo ngoku, ke sebenzisa ithuba.